राउटे भेट्न टिकट ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > राउटे भेट्न टिकट !
June 6, 2019 June 6, 2019 GRISHI469
बस्ती छिर्न टिकट ! सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । हो, दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको छ । राउटे जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको समुदाय हो । योे समुदायको छुट्टै भाषा र संस्कृति छ । सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा रहेका राउटे समुदायको बस्तीमा पुग्नेको संख्या बढेपछि गाउँपालिकाले यसलाई पर्यटन व्यवसायका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
‘राउटेलाई हेर्न आउनेको संख्या बढ्दो छ। जथाभाबी प्रवेश गर्ने भीडले राउटेको संस्कृति हराउने खतरा छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वली भन्छन्, ‘हामीले राउटे समुदायलाई रूपान्तरण गर्दैछांै । राउटे बस्तीमा छिर्दा टिकट काट्नुपर्छ ।’ टिकट व्यवस्थाले राउटे बस्तीमा जथाभाबी प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने र आम्दानी पनि हुने गाउँपालिकाको दाबी छ । टिकटबाट संकलित रकम राउटेको उत्थान र संरक्षणमा लगानी गरिनेछ ।
हाल राउटे बस्तीमा सहयोगका नाममा पुग्नेको लर्को लाग्ने गरेको छ । टिकट शुल्कबारे भने छलफल भइरहेको अध्यक्ष वलीले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
नेवा गुठि क्यानडाकाे समयबजी तथा सांकृतिक नाच अगष्ट २४ मा हुदै ।
मबाट गल्ती भएको छैन, घटनाको कारण पछि खोल्छु : महरा
February 19, 2020 February 19, 2020 GRISHI
नेकपा निकट प्रेस संगठनमा छुट्टा छुट्टै भेलाको आयोजना
वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठलाई डिन बनाएको विरोधमा अनेरास्ववियु आन्दोलित !
June 18, 2020 February 8, 2021 Raju Thapa